Imaaraatka Carabta ayaa ku lug lahaa dagaalka Yemen, kaas oo socday lix sano.
2020, waxa ay u tahay sanad muhiim ah Isutaga Imaaraatka Carabta, dalkan yar ee Khaliijka laakiin isla markaa aad u hodan ah oo hami weyn leh. Wuxuu ergo u diray Mars; waxa uu heshiis nabadeed oo taariikhi ah la galay Israel; oo ay ku guuleysatay in uu si aad ah uga sii horreyso wadada ka adkaaday Covid-19, waxa ay ku guulaysatay in uu yeelsho warshado oo ay u dirto Boqortooyada Ingiriiska diyaarad gaar ah oo daawo sida. Waxa ay sidoo kale la gashay dagaal istiraatiiji ah oo aad u adag Dowladda Turkiga si aysansan saamayn ugu yeellan wadamada dagaaladda badan wajahay ee Liibiya, Yemen iyo Soomaaliya. hadaba yaa wada Imaaraadka?
Kulan Fursad ah
Waa May 1999 dagaalki Kosovo wuxuu socday in kabadan hal sano. Waxaan taaganahay saxanka dhexdiisa aqal cooshad ka sameysan oo ku yaal xero sifiican loo difaaco oo ku taal xadka Albania iyo Kosovo, oo ah meel ay ka buuxaan qaxootiga Kosovar.
Xerada waxaa aasaasay Ururka Bisha Cas ee Imaaraatka waxayna Imaaraatku la yimaadeen Konteenaro buuxa oo ah cunto ah, hilibley, injineero isgaarsiineed, imaam, iyo cutubyo ciidan ah oo gaaf wareegaya hareeraha Humvees. oo lagu rakibay qoryaha darandooriga u dhaca.
Maalin ka hor markii aan ka soo duulnay diyaarado helicopters ah oo loo yaqaan Puma oo ay wateen duuliyeyaal ka tirsan Ciidamada Cirka ee Imaaraatka, iyada oo sii marayo wabiyada dhaadheer ee woqooyiga bari ee Albania.
Ninka hadda ilkaha ku cadaynaya saxanka agtayda waa dheer yahay, gar buu leeyahay, oo Ookiyaal ayuu xiran yahay. Waxaan u aqoonsan yahay inuu yahay Mohammed bin Zayed, oo ka qalin jabiyay Akadeemiyadda Milatariga ee Boqortooyada Ingiriiska ee Sandhurst iyo xoogga dhaqaajiya ka dambeeya doorka millatari ee sii kordhaya ee Imaaraatka – ma wareysi ayaan la yeelan karnaa telefishanka, ayaan weydiinayaa? Aad uma xiiseynayo, laakiin ugu dambeyn wuu oggol yahay, Imaaraadka, ayuu sharraxay, waxa ay istiraatiijiyad la gashay Faransiiska. Iyada oo qayb ka ah heshiiska lagu iibsanayo 400 Taangiyada Leclerc ee Faransiiska, Faransiisku wuxuu qaadanayaa guuto ka tirsan ciidamada Imaaraatka iyagoo ku tababaraya Faransiiska si ay ugu diraan Kosovo, oo ah dal xorriyaddiisa qaatay wax ka yar 30 sano ka hor. , waxay ahayd tallaabo geesinimo leh. Halkaas, geeskaas fog ee Balkans, waxaan in ka badan 3,200 km u jirnay Abu Dhabi, laakiin Imaaraadku wuxuu si cad u lahaa hami ka fog xeebta Gacanka.
Waxa ay noqotay dowladdii ugu horreysay ee Carab casri ah ee ciidamadeeda qalabka sida galaan Yurub, iyagoo taageeraya NATO.
“Dowlad yar oo aan la aqoonsan”
Kadib waxaa lageeyay Afghanistan. Ciidamada Imaaraatka oo aysab ka warqabin inta badan dadweynaha Imaaraatka, ciidamada Imaaraatka ayaa si qarsoodi ah uga bilaabay la shaqeynta NATO ee gudaha Afganistaan waxyar kadib markii hoos loo dhigay awoodii Taalibaan, ayaa loo ogolaaday Amiirka Dhaxalsugaha ah ee Abu Dhabi, Maxamed. Bin Zayed – Sannadkii 2008 in uu tago Afganistaan, waxaan booqday cutub ka tirsan ciidamadiisa gaarka ah ee ku sugan Saldhiga Cirka ee Bagram waxaanan arkay sida ay u shaqeeyaan. Iyagoo ku socdaalaya gawaarida gaashaaman ee Brazil iyo Koonfur Afrika, waxa ay aadeen tuulo fog oo faqiir ah oo reer Afgaanistaan ​​ah, waxayna u qaybiyeen kutub Quraan ah iyo sanaadiiq nacnac bilaash ah, ka dibna waxay la fariisteen dadka waayeelka ah “Maxaad u baahantihiin t?” ayay weydiiyeen, “Masaajid, dugsi, ceelal laga qodayo si loo helo biyo la cabbo?” Imaaraadku waxa ay bixiyeen lacagta qandaraasyadana waxaa lagu galiyay gudaha, raadadka Emiratis wuu yaraa, laakiin meelkasta oo ay aadaan waxa ay adeegsadeen lacag iyo diin si ay isugu dayaan in ay yareeyaan tuhunka baahsan ee maxaliga ah ee ciidamada NATO, oo ay ku bixiyeen dadaal badan.
Gobolka Helmand waxa ay sidoo kale ka barbar dagaalameen ciidamadii Ingiriiska. Xoghayihii hore ee gaashaandhiga Mareykanka Jim Mattis ayaa ugu magac daray Imaaraatka Carabta “Little Sparta” oo ah wadan yar oo aan aad loo aqoon, dadka ku noolna ay ka yaryihiin 10 milyan, laakiin ku dagaalamaya nooc ka sareeya.
Yemen: sumcad dhaawacday Imaaraadka.
Kadib Yemen iyo olole millatari oo dhibaatooyin badan ay hareeyeen.Markuu Amiir Maxamed Bin Salmaan Sacuudi Carabiya dalkiisa galiyay dagaalkii sokeeye ee musiibada ahaa ee Yemen sanadkii 2015, Isutagga Imaaraatka Carabta ayaa kusoo biiray oo diray dagaalyahanadooda. F-16s si ay u fuliyaan duqeymo cirka ah oo ka dhan ah fallaagada Xuutiyiinta, sidoo kalena ay u diraan ciidamadooda koonfurta. Xagaagii 2018 waxay u daabulayn ciidammo jasiiradda istiraatiijiga ah ee Yemen ee Socotra waxayna uruuriyeen ciidan weerar ku qaada saldhig ku yaal Assab, Ereteriya, iyagoo dib u guranaya. daqiiqadii ugu dambeysay ee qorshayaasha ahaa in loo diro Badda Cas si ay dib ugula soo noqdaan dekedda Xudeyda oo ay kala wareegeen Xuutiyiinta.
Dagaallada Yemen ayaa socday ku dhowaad lix sano, ma jiraan cid si cad ugu guuleysan karta, Xuuthiyiintuna waxay weli ku sii adkeysanayaan caasimadda Sanca, iyo guud ahaan dalka intiisa badan.Ciidamada Imaaraatka Carabta waxaa soo gaaray khasaarooyin, oo ay ku jiraan in ka badan 50 gantaal ay dhuftaan goobaha shacabka oo sababay in lagu dhawaaqo seddex maalmood oo baroor diiq qaran.Sawaariiqda Imaaraatka Carabta waxaa sidoo kale waxa ay waxyeeleeyeen xiriirkii ay la laheyd qaar ka mid ah maleeshiyooyinka maxaliga ah ee caanka ah ee xiriirka la leh Al-Qaacida, iyo warbixinada ay soo saareen dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha. in wada-hawlgalayaasha Imaaraatka Carabta ay tobanaan maxaabiis ah ku xireen konteenar maraakiibta lagu raro, halkaas oo ay ugu dhinteen neef qabatinka kuleylka.
Israel: isbahaysi cusub
Tan iyo waagaas, Imaaraadku wuxuu yareeyay ka qayb qaadashadiisa dagaalka burburka Yemen, laakiin wuxuu sii wadaa inuu kordhiyo saldhigyadiisa militari iyo isku dayga muranka dhaliyay ee ah inuu dib u rogo saameynta sii kordheysa ee Turkiga ee gobolka, halka Turkiga ay joogitaan muuqda ku leedahay caasimada Yemen. Soomaaliya, Muqdisho, Isutagga Imaaraatka Carabta waxa ay taageereysaa dhulka gooni u goosadka ah ee Somaliland waxayna saldhig ka dhisteen magaalada Berbera, gacanka Cadmeed, Liibiya waxa ay ku biireen Ruushka iyo Masar si ay u taageeraan xoogagga Khalifa Haftar ee bariga ka soo horjeeda. Bishii Sebtember, Isutagga Imaaraatka Carabtu wuxuu maraakiib iyo diyaarado dagaal u diray jasiiradda Crete si ay tababar wada jir ah ula sameeyaan Giriigga, maadaama dalkaas u diyaar garoobay iskahorimaad suurtagal ah oo kala dhexeeyaTurkiga. Xuquuqda ceelal qodista ee bariga Mediterranean-ka.
Benjamin Netanyahu iyo Dhaxal-sugaha Boqortooyada Mohammed bin Zayed ayaa gorgortanka heshiiska ka helay taageerada Mareykanka.
Hadda, ka dib markii si lama filaan ah looga dhawaaqay Aqalka Cad, waxaa jira isbahaysi weyn Imaatinka Imaaraadka iyo Israel, kaas oo ka dhigan sixiix rasmi ah sannado badan oo iskaashi qarsoodi ah (Sida Sacuudi Carabiya, Imaaraadku wuxuu si aamusnaan ah u helayaa barnaamijyo Qarsoodi oo laga sameeyay Israel si loola socdo muwaadiniintiisa.
In kasta oo isbahaysigu uu ka kooban yahay noocyo badan oo caafimaad, Tignoolajiyad, dhaqan iyo ganacsi ah, haddana waxay kaloo leedahay awood ay ku abuurto istiraatiijiyad adag oo xagga militariga iyo amniga ah, iyadoo ka faa’iideysanaysa Israiil teknoolojiyadda iyo jeebadaha waaweyn iyo himilooyinka caalamiga ah ee Imaaraadka. Cadowga guud ee labada dal waa Iran,waana ay cambaareeyay heshiiska, si la mid ah Turkiga iyo Falastiiniyiinta, waxay ku eedeeyeen Isutaga Imaaraatka Carabta khiyaanaynta himilada Falastiin ee dowlad madaxbanaan.
Iyadoo isha lagu hayo xiddigaha
Hamiga Abu Dhabi intaas kuma eka. Caawinta Mareykanka, waxay noqotay ummaddii ugu horreysay ee Carbeed ee ergo u dirta Mars.
Barnaamij miisaaniyadiisu dhan tahay 200 milyan oo doolar oo loogu magac daray “Rajo”, baaritaankiisa wuxuu durbaba ku socdaalaa hawada sare 126,000 km / saac ka dib markii uu ka duulay jasiirad fog oo Jabbaan ah.
Gantaalkii uu ku socday baaritaanka Imaaraadka ayaa ka soo duushay Japan bishii July.
Waxaa loo qorsheeyay in ay gaarto halka ay u socoto, oo 495 milyan oo kilomitir u jirta, bisha Febraayo. Markay halkaa gaarto, waxa ay khariidayn doontaa gaaska hawada ku hareeraysan ee meeraha cas, iyadoo xogta dib loogu celin doono dhulka “Waxaan dooneynaa inaan noqono ciyaartoy caalami ah,” ayuu yiri wasiiru dowlaha arrimaha dibada ee Imaaraatka Carabta Anwar Gargash. “Waxaan dooneynaa inaan jabinno caqabadaha waxaanan u baahanahay inaan qaadno qataraha istiraatiijiyadeed si aan u jabinno caqabadahaas.” Si kastaba ha noqotee, waxaa jira walaac ah in iyadoo si dhaqso leh ku socota iyo masaafada intaa le’eg ay jirto, Imaaraadku wuxuu halis ugu jiraa inuu aad u fogaado. “Su’aal kama taagna. in Imaaraadku yahay awooda militari ee ugu wax ku oolka badan gobolka Carabta, ayuu yiri Michael Stephens oo ah falanqeeyaha khaliijka.
Waxay awood u leeyihiin in ay ciidamo u daad gureeyaan wadamada dibada si ay dawladaha kale ee Carabtu aan u fududayn. baaxadda iyo awoodda, iyo qaadashada dhibaatooyin fara badan isla mar ahaantaana waa halis oo mustaqbalka fog a, waxay ku dhammaan kartaa in lagaa hor yimaado.
W/T: Mowlid Mo’allim Adam